Bit By Bit - လေ့လာခြင်းအပြုအမူ - 2.3.1.2 အမြဲတမ်း-On
ပထမဦးစွာ, ဒေတာစုဆောင်းအမြဲ-အပေါ်ယခင်ကမဖွစျနိုငျကွနည်းလမ်းတွေထဲမှာမမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာမှသုတေသီများနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် 2013 ခုနှစ်, နွေရာသီအတွက်တူရကီအတွက် Occupy Gezi ဆန္ဒပြပွဲများပုံမှန်အားဖြင့်ထိုအဖြစ်အပျက်စဉ်အတွင်းဆန္ဒပြသူများ၏အပြုအမူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်မယ်လို့လေ့လာနေစိတ်ဝင်စားသုတေသီများ။ Ceren Budak နှင့် Duncan က Watts (2015) နှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်စဉ်အတွင်းရှေ့တော်၌, Twitter ကို-သုံးပြီးဆန္ဒပြသူတွေကိုလေ့လာဖို့ဖို့အမြဲ-အပေါ်တွစ်တာ၏သဘောသဘာဝကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါသူတို့ကအတွင်းနဲ့ဖြစ်ရပ် (ပုံ 2.1) ပြီးနောက်ရှေ့တော်၌, (ထိုဆန္ဒပြပွဲနှင့် ပတ်သက်. tweet ဘူးသောသူသို့မဟုတ်သင်တန်းသားများ) Non-သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါအုပ်စုတစ်စုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ စုစုပေါင်းကာလ၌မိမိတို့ဟောင်းပို့စ် panel ကိုနှစျနှစျကျြော 30,000 ကလူချက်တွေကိုပါဝင်သည်။ ဒီအခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဆန္ဒပြပွဲများအနေဖြင့်အသုံးများသောဒေတာတိုးပွားလာခြင်းအားဖြင့်, Budak နှင့် Watts အများကြီးပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ခဲ့ကြတယ်: သူတို့ Gezi ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်သဘောထားများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်လူမျိုး၏အဘယျအမြိုးမြိုးခန့်မှန်းနိုင်ခဲ့ကြတယ် သင်တန်းသားများနှင့် Non-သင်တန်းသားများ, (Gezi စဉ်အတွင်းမှ Pre-Gezi နှိုင်းယှဉ်) ကိုရေတိုရေရှည်နှင့်ရေရှည်၌ (-Gezi post မှ Pre-Gezi နှိုင်းယှဉ်) နှစ်ဦးစလုံး။
ပုံ 2.1: ကအသုံးပြုဒီဇိုင်း Budak and Watts (2015) အတွစ်တာ၏သဘာဝအစဉ်အမြဲ-on သုတေသီသူတို့နှင့် ပတ်သက်. ထည့်သွင်းထားတဲ့ဟောင်းပို့စ် panel ကိုခေါ်တော်သောအရာကိုဖန်တီးအသုံးပြုခြင်းဖြင့် 2013 ခုနှစ်၏နွေရာသီအတွက်တူရကီနိုင်ငံ Gezi ဆန္ဒပြပွဲများ Occupy လေ့လာဖို့ နှစျနှစျကျြော 30,000 ကလူ။ နှိုင်းယှဉ်ခုနှစ်တွင်ဆန္ဒပြပွဲများကာလအတွင်းသင်တန်းသားများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောပုံမှန်လေ့လာမှု, အဟောင်းပို့စ် panel ကို၎င်း, အဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်စဉ်အတွင်း 1) သင်တန်းသားများမှဒေတာမီနှင့်ထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက်သူ့မတိုင်ခင် Non-သင်တန်းသားများထံမှ 2) ဒေတာကထပ်ပြောသည်။ ဒီသန့်စင်ဒေတာဖွဲ့စည်းပုံမှာစဉ်အတွင်းမှ Pre-Gezi နှိုင်းယှဉ်ခြင်း (Gezi ဆန္ဒပြပွဲများတွင်ပါဝင်ရန်နှင့်နှစ်ဦးစလုံးရေတိုရေရှည်အတွက်သင်တန်းသားများနှင့် Non-သင်တန်းသားများ၏သဘောထားများအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခန့်မှန်းဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်လူမျိုး၏အဘယျအမြိုးမြိုးကိုခန့်မှန်းရန် Budak နှင့် Watts enabled Gezi) နှင့်ရေရှည်အတွက် ()-Gezi post မှ Pre-Gezi နှိုင်းယှဉ်။
ဒါဟာ 30,000 လူများအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအချက်အလက်များစုဆောင်းခြင်းအတော်လေးစျေးကြီးကြပြီဖြစ်သော်လည်းဤအခန့်မှန်းချက်အခြို့, ဒေတာစုဆောင်းသတင်းရပ်ကွက်များ (ဥပမာ, သဘောထားပြောင်းလဲမှု၏ရေရှည်ခန့်မှန်းချက်) အမြဲ-အပေါ်မပါဘဲကြပြီနိုင်ကြောင်းမှန်သည်။ ထိုအပင်တစ်န့်အသတ်ဘတ်ဂျက်ပေးထားငါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သုတေသီများအချိန်အတွက်ပြန်ခရီးနှင့်တိုက်ရိုက်အတိတ်အတွက်သင်တန်းသားများအမူအကျင့်ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့ခွင့်ပြုမဆိုအခြားနည်းလမ်းစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ အနီးဆုံးကအခြားရွေးချယ်စရာအမူအကျင့်များနောက်ကြောင်းပြန်အစီရင်ခံစာများစုဆောင်းဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအစီရင်ခံစာများကန့်သတ်အသေးစိတ်မှုနှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာတိကျမှန်ကန်မှု၏လိမ့်မည်။ စားပွဲတင် 2.1 တစ်မျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်လေ့လာဖို့တစ်ဦးအမြဲ-အပေါ်ဒေတာအရင်းအမြစ်ကိုသုံးကြောင်းလေ့လာမှုများ၏အခြားဥပမာပေးစွမ်းသည်။
စားပွဲတင် 2.1: အမြဲ-အပေါ်ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်များ အသုံးပြု. မမျှော်လင့်ဘဲဖြစ်ရပ်များ၏လေ့လာရေး။
တူရကီနိုင်ငံ Gezi လှုပ်ရှားမှု Occupy တွစ်တာ Budak and Watts (2015)
ဒုတိယအချက်မှာအမြဲ-အပေါ်ဒေတာစုဆောင်းမူဝါဒချမှတ်သူများမယ့်လက်ရှိအပြုအမူကနေလေ့လာသင်ယူဒါပေမယ့်လည်းသူကတုံ့ပြန်မဟုတ်ချင်ဘယ်မှာ setting တွင်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုငျသော Real-time တိုင်းတာ, ထုတ်လုပ်သုတေသီများနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆိုရှယ်မီဒီယာဒေတာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်လမ်းပြသုံးနိုင်တယ် (Castillo 2016) ။
နိဂုံးအတွက်, ဒေတာစနစ်များကိုအမြဲ-အပေါ်မျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်များကိုလေ့လာနှင့်မူဝါဒချမှတ်သူများမှ real-time သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသီများက enable ။ ငါ, သို့သော်, ကြောင်းအမြဲ-အပေါ်ဒေတာစနစ်များကိုအချိန်ရဲ့ရှည်လျားကာလကျေ​​ာ်အပြောင်းအလဲများကိုခြေရာခံရန်သုတေသနပညာရှင်များကို enable ကြောင်းအဆိုပြုကြဘူး။ များစွာသောကြီးမားသောဒေတာစနစ်များကိုအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့-တစ်ဦးကြောင့်ပျံ့ (ပုဒ်မ 2.3.2.4) လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။